ပိုလန်ကို အနိုင်ယူပြီး ရလဒ်ဆိုးတွေကနေ ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ အီတလီ
SUN 14 OCT 2018 UEFA NATIONS LEAGUE - GROUP A3
Poland01 Italy
FT Biraghi (90'+2 minutes)
15 Oct 2018 . 10:26 AM
အခုနောက်ပိုင်းမှာ ခြေစွမ်းပိုင်းကျဆင်းနေပြီး နိုင်ပွဲတစ်ပွဲရဖို့ ခက်ခဲနေတဲ့ အီတလီအသင်းဟာ Nations League ပြိုင်ပွဲမှာ ပိုလန်အသင်းကို ( ၀ – ၁ )နဲ့ အနိုင်ယူပြီး နိုင်ပွဲတစ်ပွဲပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနိုင်ပွဲကြောင့် အီတလီအသင်းဟာ နောက်ဆုံး(၅)ပွဲဆက် နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးနေမှုကို ရပ်တန့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပိုလန် ( ၀ – ၁ ) အီတလီ
နှစ်သင်းလုံးဟာ လူစုံပွဲထွက်လာကြပြီး ပိုလန်အသင်းကို လီဝန်ဒေါစကီး Lewandowski ၊ မီလစ် Milik ၊ ဇီလင်စကီး Zieliński တို့ကဦးဆောင်လာခဲ့ကြသလို အီတလီအသင်းကိုတော့ ဗာရက်တီ Verratti ၊ ယော်ဂျင်ဟို Jorginho နဲ့ အင်ဆစ်ဂ်နီ Insigne တို့ကဦးဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ပွဲအစမှာပဲ ယော်ဂျင်ဟိုရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အဝေးကန်ချက် ဘားတန်းထိထွက်ခဲ့တာကြောင့် အီတလီအသင်းအတွက် နစ်နာခဲ့တယ် လို့ပြောရမှာပါ။ နိုင်ပွဲရဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ အီတလီအသင်းဟာ ပွဲအစထဲက ပိုလန်အသင်းဘက်ကို တရစပ်တိုက်စစ်ဆင် ဖိအားပေးကစားခဲ့ပါတယ်။ အီတလီအသင်း တိုက်စစ်မှုး အင်ဆစ်ဂနီရဲ့ ပိတ်သွင်းချက် ဘားတန်းထိထွက်ခဲ့သလို အီတလီအသင်းရဲ့ ထိုးဖောက်ကန်သွင်းမှုတွေကိုလည်း ပိုလန်ဂိုးသမား ဆက်ဇနီ Szczęsny လက်စွမ်းပြကာကွယ်နေတာကြောင့် သွင်းဂိုးတွေနဲ့ ဝေးကွာနေခဲ့ရပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ ပိုလန်အသင်းက အီတလီဘက်ကို ထိုးဖောက်မှုတွေပြုလုပ်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အီတလီ တောင်ပံကစားသမား ဘာနာဒက်ချီ Bernardeschi အပိုင်ခေါင်းတိုက်ခွင့်ကို လွဲချော်ခဲ့သလို ဂိုးသမား ဒွန်နာရမ်မာ Donnarumma ဟာလည်း ပိုလန်အသင်းရဲ့ ထိုးဖောက်တိုက်စစ်ဆင် ကန်သွင်းမှုတွေကို လက်စွမ်းပြကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပွဲချိန် (၉၂)မိနစ်မှာတော့ အီတလီအသင်းဟာ အဖိုးတန်အနိုင်ဂိုးရရှိခဲ့ပြီး ဒီဂိုးကိုတော့ ထောင့်ကန်ဘောကနေ တစ်ဆင့်ရရှိခဲ့တဲ့ အခွင့်အရေးကို နောက်ခံလူ ဘီရာဂီ Biraghi ကပိတ်သွင်းယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပွဲလုံးကို ခြုံကြည့်ရင်တော့ နည်းပြမန်စီနီ Mancini ရဲ့ အီတလီအသင်းဟာ ပိုလန်အသင်းကို အသာစီးကစားနိုင်ခဲ့ပြီး ထိုက်တန်တဲ့နိုင်ပွဲတစ်ပွဲကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Nations League ပြိုင်ပွဲ ရလဒ်များ
Russia2–0Turkey
Romania0–0Serbia
Lithuania 1 –4Montenegro
Azerbaijan 1 – 1 Malta
Faroe Islands 1 – 1 Kosovo
Photo: Bleacher Report , Flipboard , Houston Chronicle
ပိုလနျကို အနိုငျယူပွီး ရလဒျဆိုးတှကေနေ ရုနျးထှကျနိုငျခဲ့တဲ့ အီတလီ
အခုနောကျပိုငျးမှာ ခွစှေမျးပိုငျးကဆြငျးနပွေီး နိုငျပှဲတဈပှဲရဖို့ ခကျခဲနတေဲ့ အီတလီအသငျးဟာ Nations League ပွိုငျပှဲမှာ ပိုလနျအသငျးကို ( ၀ – ၁ )နဲ့ အနိုငျယူပွီး နိုငျပှဲတဈပှဲပွနျလညျရှာဖှနေိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဒီနိုငျပှဲကွောငျ့ အီတလီအသငျးဟာ နောကျဆုံး(၅)ပှဲဆကျ နိုငျပှဲပြောကျဆုံးနမှေုကို ရပျတနျ့နိုငျခဲ့ပါတယျ။
ပိုလနျ ( ၀ – ၁ ) အီတလီ
နှဈသငျးလုံးဟာ လူစုံပှဲထှကျလာကွပွီး ပိုလနျအသငျးကို လီဝနျဒေါစကီး Lewandowski ၊ မီလဈ Milik ၊ ဇီလငျစကီး Zieliński တို့ကဦးဆောငျလာခဲ့ကွသလို အီတလီအသငျးကိုတော့ ဗာရကျတီ Verratti ၊ ယျောဂငျြဟို Jorginho နဲ့ အငျဆဈဂ်နီ Insigne တို့ကဦးဆောငျလာခဲ့ကွပါတယျ။ ပှဲအစမှာပဲ ယျောဂငျြဟိုရဲ့ ကောငျးမှနျတဲ့ အဝေးကနျခကျြ ဘားတနျးထိထှကျခဲ့တာကွောငျ့ အီတလီအသငျးအတှကျ နဈနာခဲ့တယျ လို့ပွောရမှာပါ။ နိုငျပှဲရဖို့ လိုအပျနတေဲ့ အီတလီအသငျးဟာ ပှဲအစထဲက ပိုလနျအသငျးဘကျကို တရစပျတိုကျစဈဆငျ ဖိအားပေးကစားခဲ့ပါတယျ။ အီတလီအသငျး တိုကျစဈမှုး အငျဆဈဂနီရဲ့ ပိတျသှငျးခကျြ ဘားတနျးထိထှကျခဲ့သလို အီတလီအသငျးရဲ့ ထိုးဖောကျကနျသှငျးမှုတှကေိုလညျး ပိုလနျဂိုးသမား ဆကျဇနီ Szczęsny လကျစှမျးပွကာကှယျနတောကွောငျ့ သှငျးဂိုးတှနေဲ့ ဝေးကှာနခေဲ့ရပါတယျ။
ဒုတိယပိုငျးမှာတော့ ပိုလနျအသငျးက အီတလီဘကျကို ထိုးဖောကျမှုတှပွေုလုပျလာနိုငျခဲ့ပါတယျ။ အီတလီ တောငျပံကစားသမား ဘာနာဒကျခြီ Bernardeschi အပိုငျခေါငျးတိုကျခှငျ့ကို လှဲခြျောခဲ့သလို ဂိုးသမား ဒှနျနာရမျမာ Donnarumma ဟာလညျး ပိုလနျအသငျးရဲ့ ထိုးဖောကျတိုကျစဈဆငျ ကနျသှငျးမှုတှကေို လကျစှမျးပွကာကှယျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ပှဲခြိနျ (၉၂)မိနဈမှာတော့ အီတလီအသငျးဟာ အဖိုးတနျအနိုငျဂိုးရရှိခဲ့ပွီး ဒီဂိုးကိုတော့ ထောငျ့ကနျဘောကနေ တဈဆငျ့ရရှိခဲ့တဲ့ အခှငျ့အရေးကို နောကျခံလူ ဘီရာဂီ Biraghi ကပိတျသှငျးယူခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ တဈပှဲလုံးကို ခွုံကွညျ့ရငျတော့ နညျးပွမနျစီနီ Mancini ရဲ့ အီတလီအသငျးဟာ ပိုလနျအသငျးကို အသာစီးကစားနိုငျခဲ့ပွီး ထိုကျတနျတဲ့နိုငျပှဲတဈပှဲကို ရရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
Nations League ပွိုငျပှဲ ရလဒျမြား
by Ko Kyue .4mins ago
by Naing Linn . 60 mins ago